Car "Hyundai H1": incazelo, Ukucaciswa, ukubuyekezwa
"Hyundai H1" - ibanga evenini ububanzi kwezicelo, okuyinto namanje eyaziwa ngokuthi i- Grand Starex. Isizukulwane sokuqala sakhishwa ngo-1996. Futhi nowokugcina, lesibili liyaqhubeka lekufanele akhicitwe futhi kuze kube yilolu suku, kusukela 2007.
Umlando ezimotweni Korean futhi amancane waqala ngo-1987. Yingaleso sikhathi lapho eseqala ukuveza model ukuthi saziwa ngokuthi Hyundai Umusa. Futhi-ke, ngemva kweminyaka engu-9, ekukhanyeni baqala ukuvela Starex izimoto. Yiqiniso, uGrace, futhi, baqhubeka ukukhiqiza. Demand laliphezulu kakhulu, kokubili kwelinye futhi imodeli wesibili.
Kwakuwusuku nguqulo 2.5 CRDi LWD enamandla kakhulu. Lezi zimoto ifakwe enamandla 140-amahhashi injini. Bakhandwa bephume 2000 kuya ku-2004. inguqulo ye-imodeli Ngaphansi enamandla yanikwa Starex 2.4 LWD. Ngaphansi hood walo wawenziwe injini 135-litre. Futhi kusadingeka izinjini ezikhiqiza 110, 100 kanye 85 hp Iyunithi umpofu kwakumi lowo amandla kwaba 80 hp
Kuyathakazelisa ukuthi phakathi isizukulwane sokuqala wonke-wheel drive version. Kwakumelwe etholakalayo nge motors 110, 100, 140 no-80 hp Nokho, ayisekho ukukhiqiza onobuhle ezifana "Hyundai H1". Four-wheel drive limukile, futhi manje kukhona kuphela ezingemuva.
Mayelana isizukulwane sesibili
Imininingwane akushintshanga kangako. Wahlala Turbo 2.5-litre izinjini, ngokuphelele kungase kutholakale ngaphambili. Kuphela, kwanqunywa ukuba ngcono them ngaphakathi accordance nga izidingo zanamuhla. Ngenxa yalokho, izitayela 2007 yayenziwa nge injini 99, 116 kanye 170 amahhashi. Nokho kwakukhona injini uphethiloli ukuze 172 hp
Futhi ushintshe ingaphakathi imoto. Useye waba ngaphezulu ezikhangayo, kwenta na ergonomic. Salon ifakwe ngempela, ukuze wonke umuntu ezizwa kuwo.
isihlalo engemuva kungenziwa eligoqiwe, enyakazayo futhi hambisa ezihlukahlukene inhlanganisela. Akwaziwa Ukucushwa Good ziyoyizwa ngaphandle kwezinkinga. Izihlalo eziphambili ukhululekile kakhulu kakhulu. Ngaphezu umshayeli, angazamukela lapho abantu ababili ngaphezulu.
Ukubheka wezangaphakathi, umuntu angabona ngokushesha baqonde ukuthi Abadali ziye zakhomba imoto njengoba nemoto. Kungakapheli 2-zone "isimo" obhekene naso, lapho namanje beya amafasitela. Futhi kwesitulo kungase kushintshwe.
Okuningi kungashiwo ukuthi imoto "Hyundai H1" Isizukulwane sesibili isibe ashukumisayo ngaphezulu, ngokungafani kuya onobuhle zeminyaka eyedlule yokukhululwa. Nokho, ngenxa yokuthi emaphethelweni bonnet liphansi kakhulu, ezinye aqondisa lokufeza nzima.
I ngesivinini esiphezulu, okungase ahlakazekile ukuba imoto elihlomile 170-amahhashi injini, kuyinto 183 km / h. Ubuncane petrol ngu emhlabathini 11 amalitha per km 100. On umzila kuthatha ngaphansi - mayelana 7 amalitha. Uphethiloli singavalwa 75 amalitha nophethiloli.
Ngesikhathi misa, kanye phambi ukukhwezwa disc amabhuleki. Ukumiswa - torsion ne-multi-link. Ground imvume 19 amasentimitha, hhayi kakhulu Russia (ikakhulukazi evenini), kodwa eyamukelekayo. Into esemqoka - ukubambezela ngokushesha njengoba emkhakheni buka avele imigodi futhi imigodi.
Labo imoto "Hyundai H1", okuyinto zakhiqizwa 1990 sekwephuzile futhi kowezi-2000, zazingekho Russia, njengoba ezweni lethu, kungukuthi ukuthunyelwa. Kodwa izindaba zeminyaka yamuva ongene emakethe imoto wendawo. Futhi kwaduma. Abantu abaningi kudingeka ezimotweni esisetshenziselwa, kodwa hhayi wonke umuntu angakwazi ukukhokhela evenini kusuka Volkswagen AG futhi Mercedes-Benz. Kodwa isabelomali ucishe "Hyundai" - ngempela.
Design we eseyintsha Ubuyisé ngokulinganisela ezinzima futhi iboshwe. Ngokushesha yabakhanga evuvukele isondo yayinamakhothamo kanye vyshtampovki ezengeziwe inqwaba. Uhlobo kungenziwa ngokuthi jikelele. umshini okunjalo Ungasingatha indima njengomkhaya, futhi imoto yenkampani. Kuyaphawuleka ukuthi entsha "Hyundai H1" etholakala izitayela umzimba eziningana, kodwa abathengi Russian uphiwa eyodwa kuphela - umgibeli, i-8-seater.
Izinto eziningi ezithakazelisayo ukutshela futhi mayelana lokuthi ingxenye enkulu "Hyundai" imoto. I "H1" esisha okunikwa amakhasimende nebangomuso izinjini ezintathu ezahlukene. Phakathi kwabo - amabili diesel 2.5-litre. Omunye edonsa 116 amahhashi, kanti eyesibili - 170 hp Izimoto kungabuye igcwaliswe ngophethiloli 2.4-litre engine. Amandla akhe 174 hp
PPC zingabuye zikhethwe. Iyatholakala 6-step "Mechanics" futhi 5-band "okuzenzakalelayo". Naphezu kweqiniso lokuthi kule moto utfolakala kuluhlobo of amancane, futhi uhluke Dynamics siwusizo kakhulu. Le nguqulo udizili kanye "Mechanics" ngesivinini kuya ku-100 km / h ngemizuzwana 12 nje. Nakuba i-passport kulotshiwe ukuthi 14.5. Nokho, test drive wabonisa ukusebenza okuningi esithé ukuphakama. Futhi ngempela yalokho enkulu, ngoba van unesisindo esingamathani angaba ngu 2.4.
Naphezu isisindo sayo, umshini ngempela behamba ingena ematfuba kanye kuyomfica wenza phambili. Nokho, kukhona evenini lokususa entsha "Hyundai H1". Izibuyekezo abonisa ukuthi ukuqondisa imoto abakwazi ukusingatha umthwalo. Amasondo ayo ngokushesha iba "ezisinda" kangaka. Futhi uma uya, isibonelo, oyinyoka, noma ngisho uyayeka ukusebenza. Kunoma ikuphi, kukhona umuzwa onjalo. Kodwa kuzo zonke amasondo ezifakiwe umoya disc amabhuleki.
Kuthiwani ukumiswa? Front imele ezimele, ifakwe wokubacindezela telescopic ukushaqeka ezidayiswayo. multi-isixhumanisi ezingemuva design isethwe.
Entsha "Hyundai H1" etholakala amazinga amathathu ngombala. Kodwa umehluko ikakhulu zithinta uhlelo lobuchwepheshe. Yini esingayisho ngesimo imishini? Ngisho ku inguqulo eyisisekelo ligcwele ngempela. Kukhona ama-airbag ezinhlangothini, Vehicle Stability Control, ABS, usizo ekuqaleni, isondo lesikhumba-okuqoqiwe ayo, ngokuhambisa amafasitela (abagibeli ngemuva), eziqondisa isondo ukulungiswa, izibani inkungu izihlalo ezifudumalayo phambi.
ukubaluleka imoto isimo esisha angaba yizinkulungwane 33 zamaRandi. By endleleni, uma ufuna ukulondoloza imali ethile, ungakwazi ukusesha nokunikwayo esetshenziswa / y. Isimo izimoto okunjalo kuyoba cishe entsha, futhi izindleko - ezimbalwa, iyizinkulungwane ezingamakhulu kancane.
AmaRashiya amaningi babe lokhu evenini. Kepha akusikho lokho kuphela imodeli entsha. Ngisho nangalezo zinsuku, lapho iqembu ayikhululwa eRussia namaveni abo esisetshenziselwa, abantu bayothenga kubo phesheya futhi ulethwe lapha. Ngenxa Starex - lokusetshenziswa kwemali, imoto ukhululekile futhi ivulekile sitfombe lesinotsile.
Nakuba ezinye yokuntula abanikazi futhi ukhombe ukunakwa. kuqala onobuhle isizukulwane, isibonelo, zithambekele ethubeleza ngenxa emuva ukukhanya kakhulu. Kodwa babe limnandi, ukumiswa elithambile, lokubonakala ukuphathwa. Imoto ngokoqobo zintanta endleleni. Enye plus, okuyinto ephawuleka abanikazi - khona ezingemuva yokupaka izinzwa njengoba standard. Umshini likhulu, jikelele, ngakho-ke usizo kakhulu.
Kuthiwani 'Hyundai H1 "injini? Okuhle, enhle, ethembekile. Nokho, ukudlula kwesikhathi Uzodla ngophethiloli. Kodwa uma kungukuphikisana nakutlhogeka van udizili kunokuba uphethiloli, lokhu engakhi kungaba phezu kwamehlo akho.
Futhi-ke, wonke umnikazi we "H1" kuphawula ukunakwa kakhulu ushintsho ingaphakathi. Umugqa wesibili kungenziwa efakwe ngaso sonke ngokumelene ezinyakazayo. Ngokuvamile, imoto enhle izinjongo zezomnotho noma umkhaya omkhulu.
Izindleko b / amamodeli
izimoto okusha "Hyundai H1 Stareks" abasakwazi eqolo. Nakuba ishibhile kuka mncintiswano kusukela abakhiqizi owaziwa German. Futhi yingakho abantu abadinga iveni ukhululekile futhi ivulekile, ngifuna ongakhetha b / u kulabo amamodeli sebededeliwe ngaphambili, kodwa hhayi 2015/2016.
ukukhiqizwa emotweni ku 2002 nge 2.5-litre 103-amahhashi udizili izobiza ruble ecishe ibe yizinkulungwane 300. Yiqiniso, imoto eziyosebenza, kodwa ngalesi ntengo uthenga imodeli zisesimweni esihle. Ngisho ne-alamu, amawindi asebenza ngogesi, amasondo ahamba namarimu konke gearshift ukugijima clockwork.
Okuningi ezibizayo izobiza version of the 2005 ukukhululwa nge motor 140 hp Abangaba yizinkulungwane ezingamashumi 450-500 ruble. Kodwa-ke akudingi utshalomali. A 2010 imodeli izobiza ruble ecishe ibe yizinkulungwane 900. Kodwa nge lenqwaba premium.
Ngokuvamile, uma uzama, ungakwazi imititilizo ezinhle - kokubili ngentengo kanye izinga. I negative kuphela ukuthi onobuhle ekuseni amasondo ayo kuyinto ngakwesokudla. Kodwa bambalwa abantu badidekile yilo. EliseMpumalanga Ekude, isibonelo, iningi izimoto amasondo ayo ohlangothini lwesokudla.
Perfect ushizi souffle. Recipe Gordona Ramzi
Ukuphuca lathe: ezibekiweko lobuchwepheshe
Laminate ecwebezelayo - uphawu okunethezeka nengcebo
Ingubo omthende ilungisa sibalo